Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Warbixiyay Dagaaladii Ugu Dambeeyey iyo Shilalka Gawaadhida Cadawga oo Sii Kordhaya
Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Warbixiyay Dagaaladii Ugu Dambeeyey iyo Shilalka Gawaadhida Cadawga oo Sii Kordhaya
Posted by ONA Admin	/ May 7, 2015
Warabixinadii ugu dambeeyey een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya inay sii kordhayaan shilalka ay galayaan gawaadhida ciidanka Itobiya, taasoo ay ku macneeyeen inay astaan u tahay mooraalka ciidamada cadawga ee ku sugan Ogadenya. Dagaaladii ugu dambeeyey iyo faahfaahinta warbixintaa ayaa ahaa sidan;
19/4/15 Xero-maygaag oo Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/4/15 Gujufka oo Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/4/15 Saliida oo Fiiq katirsan dagaal foolkafool ah oo CWXO iyo kuwa Wayaanaha ku dhexmaray waxaa loogu xoogsheegtay ciidankii cadawga oo laga dhigay mid ladilay iyo mid ladhaawacay waxaana ciidanka cadawga kasoo gaadhay dagaalkaas khasaare aan wali lasoo faahfaahinin.
23/4/15 Fiiqfiiqyada oo Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal aad u culus oo CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhexmaray waxaa ciidanka huubada ah ee gumaysigu soo qasbay loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.
5/5/15 Haarkaneeco oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
Wararka kale ee Xarunta Dhexe ee JWXO aan ka helnay ayaa waxaa ka mid ahaa shilalka ay galeen ciidamada gumaysiga ee ku sugan Ogadenia oo sii badanaya. Shilalkan ayaa waxaa sabab u ah cabdisi ay ka qaadeen jidgooyooyinka CWXO iyo niyad jab ay ka qaadeen hab dhaqanka kuwii soo dirsaday, waxaana la sheegayaa in darawalada qaar kood shilalka ay si kas u galayaan. Shilalkii ugu danbeeyay ee nasoo gaadhay waxay u dhaceen sidan.
2/5/15 Karinbarkhadle oo Sagag katirsan waxaa kugadoomay baabuur ay wateen ciidanka wayaanaha waxaana ku bakhtiday 3 askari tiro kalana way ku dhaawacantay.
2/5/15 Gurdumi oo Awaare katirsan waxaa iskulaayay ciidan Hawaarin ah waxayna iska dileen Sargaalkii ugusareeyay ciidankaas iyo askar kale oo aan lafaahfaahinin tiradooda.
3/5/15 Herar iyo Jigjiga dhaxdooda waxaa kugadoomay 1 baabuur oo ay wateen ciidanka cadawgu waxaana shilkaas ku bakhtiyay 3 askari.
4/5/15 Huuraale oo Dhagaxbuur darawal Hawaarin ah ayaa askari Hawaarinta ka tirsan kumariyay gaadhigii uu waday waliba si kas ah.
5/5/15 Dhagxmadow iyo Sagag dhaxdooda waxaa kugadoomay 1 baabuur waxaana ciidankii cadawga ee saaraa soogaadhay khasaare aad ubadan.